ComPsych's 2021 Health @Work Award wuxuu tagaa Rajo -gelinta onlaynka ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » ComPsych's 2021 Health @Work Award wuxuu tagaa Rajo -gelinta onlaynka ah
Rajo-wanaagga onlaynku wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo in loo doortay inuu ku guulaystay Abaalmarinta Dahabka-ugu-Heerka-wanaagsan ee shirkadaha ka hooseeya 100 shaqaale ee ComPsych's 2021 Health @Work Award. Hadda sannadkii 17aad, abaalmarintani waxay aqoonsanaysaa shirkadaha horumariya caafimaadka iyo ladnaanta shaqaalaha iyada oo loo marayo barnaamijyo hal-abuur leh oo macno u leh shaqaalahooda.
“Abaalmarintani waxay mar kale xaqiijinaysaa sida ay nooga go’an tahay shaqaalahayaga iyo dhaqanka shirkadeena. Ma jiraan wax ka muhiimsan caafimaadka jirka iyo maskaxda kooxdayada, ”ayuu yiri Agaasimaha Maareeyaha New Orleans Sam Olmsted. "Waan ku faanayaa inaan ka mid ahay urur si dhab ah u qiimeeya una dhegeysta shaqaalahiisa."
Rajo -wanaagga onlaynku wuxuu la wadaagaa masraxa ururada qaranka iyo kuwa caalamiga ah, oo ay ku jiraan Ururka Kubbadda Koleyga Qaranka (NBA), Xarunta Caafimaadka Boston, iyo shirkado kale oo abuura saamayn caalami ah.
Iyada oo lagu daray Isuduwaha Hawlaha Sara Bandurian sannadka 2020, Rajo -gelinta Online -ka ayaa awood u yeelatay inay samayso barnaamijyo iyo hindiseyaal badan oo wax ka qabtay caafimaadka shaqaalaha. Waxay bilaabeen naadiga socodka “Optimovers” si ay gacan uga geystaan ​​dhiirrigelinta dhaqdhaqaaq badan iyada oo loo marayo tartan saaxiibtinimo oo ka dhex dhaca shirkadda dhexdeeda. Waxay leeyihiin naadi buug oo kulma bishiiba waxayna bixiyaan Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha ee la -talinta caafimaadka maskaxda.
Guddiga Dhaqanka Gudaha ee Optimism wuxuu sii wadaa inuu ka fikiro siyaabo cusub oo ay shaqaaluhu u dhexgalaan midba midka kale una sii xirnaadaan, taas oo ka muhiimsan sidii hore tan iyo markii ay shirkaddu ballaarisay Atlanta iyo Washington DC.
“Waxa ugu fiican ee ku saabsan barnaamijyadeenna caafimaadka iyo fayoqabka ayaa ah inay yihiin kuwo ay naqshadeeyeen shaqaalaha laftoodu, sidaa darteed waxay gebi ahaanba ku habboon yihiin dhaqanka shirkadeena,” ayay tiri Isuduwaha Hawlaha Sara Bandurian. "Waxaan rabnaa inaan hubinno in dadku dareemaan qiime, qaddarin, iyo qaddarin wax kasta oo ay qabtaan."